ဖြိုး အလ်ဝိုင်: ၇၈၆ ဆိုတာ ….
မေး။ ။၇၈၆ လို့ ဘာဖြစ်လို့ ဆိုင်တွေမှာရေးထားတာလဲ။ အဲဒီအဓိပါယ်က ဘာလဲ ဖြေကြားပေးပါ။
ဖြေ။ ။ မြန်မာမှာ နံသင့်အက္ခရာတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ- က၊ခ၊ဂ ..အတွက် နံသင့်အက္ခရာ ၂ ဆိုတာမျိုး အါရဗီအက္ခရာတွေမှာလဲ အဲဒီလို နံသင့်အက္ခရာ တွေရှိပါတယ်။ မြန်မာမှာ အလုပ်တစ်ခုခုစလုပ်ရင် ဘုရားတပြီးလုပ်သလို မွတ်စလင်မ်တွေဟာလဲ သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ရာ အရှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့အမည်ကို တပြီးပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။အာရဗီစကားနဲ့ ကျွန်တော်/မ တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နာမတော်နှင့် အစပြုဆောင်ရွက်ပါသည်ဆိုတဲ့ စကားရပ်မှာပါတဲ့ နံသင့် အက္ခရာတွေကို ပေါင်းချလိုက်ယင် စုစုပေါင်း ၇၈၆ ရပါတယ်. တောင်အာရှဘက်က မွတ်စလင်မ်တွေဟာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ဆိုတဲ့ အမည်ကို အာရဗီအက္ခရာနဲ့နေရာတိုင်းမှာ ဖေါ်ပြယင် အဲဒီစာလုံးရေးသားထားချက်ဟာ မတော်တဆ မလျော်ကန်တဲ့နေရာရောက်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက် အဲဒီစာလုံးအစား ၇၈၆ ကို အစားထိုးအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ဟုတ်ပါ့မလား ..ဒါဆိုယင် ၇၈၆ ပေါင်းလိုက်ယင် ၂၁ ရတယ် ဆိုပြီး ပြော
ဖြေ။ ။ဟုတ်ပါတယ်၊ စင်္ကာပူမှာ ရှိတဲ့ တစ်ချို့ အိန္ဒိယ မွတ်စလင်မ်တွေရောင်းတဲ့ ထမင်းဆိုင်တွေမှာလဲ ဒီလိုပဲရေးထားတာရှိတယ် လမ်းကြုံ့ယင် ကိုယ်တိုင်မေးမြန်း စုံစမ်းကြည့်ယင်သိရမှာပါ။ မလေးရှားကမွတ်စလင်မ်တွေကို သွားမေးယင်တော့ သူတို့လဲအဲဒီအဖြေကို သိချင်ကြမှာပါ။ဒီလိုအသုံးများတာ တောင်အာရှက နိုင်ငံတွေ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယ ဘက်မှာပဲသုံးကြတာကိုး။ အာရပ်တွေတောင်ဒီလိုသုံးတာမရှိပါဘူး။ အောက်မြန်မာပြည်မှာ က အိန္ဒိယနွယ်ဖွားမွတ်စလင်မ်တွေ အရင်က သုံးခဲ့တဲ့ ဓလေ့စွဲကျန်နေခဲ့တာပါ။၇၈၆ ပေါင်းယင် ၂၁ ရတယ် ဒါကြောင့် ၂၁ ရာစု ရောက်ယင်မွတ်စလင်တွေ ဘာလုပ်တော့မယ် ညာလုပ်တော့မယ် ဆိုပြီး ရေးသားဖြန့်ဝေတာတွေ တွေ့ရ ကြားရတာ တော်တော်ကြာပါပြီ၊ ပြောရမယ်ဆိုယင် နေ၀င်းရဲ့ မဆလ အစိုးရ ခေတ်ဦးပိုင်းကတည်းကပေါ့။ ပထမပိုင်းလက်ကမ်းစာစောင်အနေနဲ့ ဖြန့်ဝေခဲ့တာ ၈၈ မှာ ရုံးတွေဖျက်တော့ လျှို့ဝှက်ရုံးတွင်းညွန်ကြားလွှာ တွေအနေနဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ စာလက်ကျန်တွေ ကိုတောင် ညောင်တုံးဘက်ကရုံးတွေမှာ ထွက်လာတာ တွေရသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း န၀တ ခေတ်ရောက်တော့ ပိုဆိုးလာပြီး စနစ်တကျ စာအုပ်ပုံစံ ထုတ်ဝေပြီး ရိုက်နှိပ်ပြီး လိုက်ဝေကြသေးတယ်။ ဘားလမ်းထဲက ထောက်လှမ်းရေးကဖွင့်ထားတဲ့ စွယ်တော် စာအုပ်ဆိုင်မှာ လက်သိပ် ထိုးပြီးရောင်းတာ မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့တွေသိသွားပြီးတိုင်လို့ အရေးယူမယ် ဘာမယ် ဟန်ဆောင်လုပ်ပြသေးတယ်။ဒါတွေဟာတကယ်တော့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးက Divide and Rule လုပ်လို့ရအောင် ဘာသာဝင်များအကြား သွေးခွဲရန်တိုက်ပေးပြီး နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါကို ဆင်ခြင်တုံတရားမသုံးပဲယုံတဲ့ မျက်ကမ်း မျိုးချစ် တွေရယ်၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေရယ်၊ သူများပစ္စည်းအချောင်လိုချင်တဲ့ တောကြောင်တွေရယ်ကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အများကြီး တောင်ငူ၊ ပြည်၊ ကျောက်ဆည် ..အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ နေရာအတော်များများမှာ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ခံရ၊ အသတ်ခံရ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ ဆုံးရှုံးခံရ ဖြစ်ခဲ့ကြရတာ န၀တ လက်ထက် နှစ်စဉ်နဲ့အမျှပါပဲ။၂၁ ရာစုရယ်မဟုတ်ပါဘူး အစ္စလာမ်ကျမ်းစာမှာ ဖေါ်ပြထားချက် အရက မှန်ကန်မှုဆိုတဲ့ သစ္စာတစ်ရားဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်အခါမှာ မှားယွင်းမှု ဆိုတဲ့ အ၀ိဇ္ဇာကို အနိုင်ရမယ်ဆိုပြီး သွန်သင်ထားတာပဲရှိပါတယ်။ တိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ပြည်သူအချင်းချင်းသွေးကွဲ ပြီးသတ်ကြဖြတ်ကြ လုကြ ယက်ကြတာဟာ နောက်ဆုံးမှာ ဘယ်သူအတွက်မှမကောင်းပါဘူး။ ဥစ္စာဓန ဆိုတာကလည်း ကုဋေ ၈၀ သူဌေးသားရဲ့ဥပမာလိုပါပဲ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေမတတ်ယင် ဘယ်လောက်ပဲရရ ပြန်ပြီး မွဲတတ်ပါတယ်။ တရားသောနည်းလမ်းနဲ့ ရှာဖွေယင် ဥစ္စာဆိုတာ ပင်လယ်ရေလိုပါပဲ ကုန်မသွားပါဘူး။ ကမ္ဘာမှာ တိုင်းပြည်တွင်း ပြည်သူအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်နေတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံက ပြည်သူအုပ်စုတစ်စုက ချမ်းသာပြီး တိုင်းပြည်တိုးတက်သွားတယ် ဆိုတဲ့ ဥပမာသမိုင်းမှာ မရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။ လူမျိုးဆိုတာ တကယ်တော့ ပညတ်ပါပဲ။ လူသာလျင်အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးပေါင်းစုံ အတူတစ်ကွနေပြီး တိုးတက်သွားတဲ့ နိုင်ငံတွေ ကမ္ဘာမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ အမေရိကန်ကို ကြည့်ပါ။ အရေးကြီးတာက တိုင်းပြည်ကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့ပါ။ လူမျိုးတိုင်း မိမိယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားကို စိတ်အေးချမ်းသာစွာ ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ကြဖို့ စိတ်ထားတတ်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ်။
The total value of the letters of "Bismillah al-Rahman al-Rahim" according to one Arabic system of numerology is 786.
There are two methods of arranging the letters of the Arabic alphabet. One method is the most common alphabetical order (used for most ordinary purposes), beginning with the letters Alif ا, ba ب, ta ت, tha ث etc.
The other method is known as the Abjad numerals' method or ordinal method. In this method the letters are arranged in the following order: Abjad, Hawwaz, Hutti, Kalaman, Sa'fas, Qarshat, Sakhaz, Zazagh; and each letter has an arithmetic value assigned to it from one to one thousand.
(This arrangement was done, most probably in the 3rd century of Hijrah during the 'Abbasid period, following the practices of speakers of other Semitic languages such as Aramaic, Hebrew, Syriac, Chaldean etc.)
If you take the numeric values of all the letters of the Basmala, according to the Abjad order, the total will be 786.
In the Indian subcontinent the Abjad numerals have become quite popular. Some people, mostly in India and Pakistan, use 786 asasubstitute for Bismillah ("In the name of Allah" or "In the name of God").
They write this number to avoid writing the name of God, or Qur'anic verses on ordinary papers, which can be subject to dirt or come in contact with 'unclean' materials. This practice does not date from the time of Muhammad and is not universally accepted by Muslims.
…………..by Myint Myat Thu